Kuthetha ukuthini ukuphupha amapolisa? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha ngamapolisa akuqhelekanga, akunjalo? Uphuphe amapolisa kwaye ufuna ukutolikwa, ke kufuneka nditsho ukuba ukwindawo elungileyo, emva kwayo yonke into kukho ukutolikwa okuninzi kulo mbandela. Amapolisa afuzisela kuluntu lwethu iqumrhu elinoxanduva, kwithiyori, yokuqinisekisa ukhuseleko, uxolo nentlalo, ukubeka iliso, ukukhokela, ukubamba nokohlwaya xa kukho imfuneko yoko Kodwa liphupha lini elinokuthethwa ngamapolisa?
Sisoloko sicebisa ukuba ngaphambi kokuba ujonge ukutolikwa uzama ukuqokelela iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka, ukuqokelela izinto kwaye ngaloo ndlela ube nokufikelela kwinkcazo ethe kratya malunga nephupha lakho.
Ngokubanzi, ukuphupha ngamapolisa kunokuba neentsingiselo ezimbini ezichazwe kakuhle: eyokuqala inesazela, apho sinembono engeyonyani okanye singekhoyo ukuba imisebenzi yethu ijongiwe (ilawulwa) kwaye oku kusenza singonwabi okanye sinokuthi sijongane iingxaki ezinzulu kwixa elizayo kwaye kufuneka sizilungiselele.
Ngaba kufuneka sicacise ngakumbi malunga nokutolikwa okunokwenzeka?
1 Ukuphupha ubanjiwe ngamapolisa
2 Ukuphupha imoto yamapolisa
3 Ukuphupha ngokuleqwa ngamapolisa
4 Ukuphupha umkhosi wamapolisa
5 Ukuphupha ukuba ulipolisa
6 Ukuphupha ngezenzo zamapolisa
Ukuphupha ubanjiwe ngamapolisa
Sikhethe ukubeka olu khetho ubuso ngobuso, kuba kwi el mundo Amaphupha, ukuphupha ngamapolisa yeyona meko iyingozi, kuba xa oku kusenzeka luphawu lokuba enyanisweni ezinye izinto ezimbi ezinokususa uxolo lwakho lwengqondo zingenzeka nangaliphi na ixesha kwaye kufuneka unike ingqalelo engaphezulu kwaye okuninzi yoxolo ukuze yonke into isonjululwe ukoneliseka kwaye ube nobomi obungcono kwaye obuqine kwikamva.
Ukuphupha imoto yamapolisa
Ukuphupha imoto yamapolisa sisilumkiso sokuba indalo iphela ikunika ingqalelo enkulu kwizinto ezibalulekileyo ohlangabezana nazo, oko kukuthi, isilumkiso ukuze ububeke esweni ubomi bakho kwaye uphephe iingxaki kamva. Olu toliko lwandiswa xa ubona imoto kwaye uqhutyelwa kuyo ngamapolisa.
Gcina ukhumbula ukuba ayisosibikezelo sokukushiya usoyika okanye into enjalo, kodwa ukuze ungayihoyi ingqalelo yakho kwaye wazi kakuhle ukuba uyaphi, izikhokelo ofuna ukuzithatha ebomini.
Ukuphupha ngokuleqwa ngamapolisa
Kukho iingxelo rhoqo zabantu abathi banoloyiko olukhulu ephupheni eliqhelekileyo: ukuba bayasukelwa ngamapolisa kwaye nangobundlongondlongo (i-siren ivuliwe, ukukhala kunye nokudubula). Kodwa kunokuthetha ntoni oku?
Nangona ezinye iisayithi zibonisa ezinye iindlela zokutolika, eyona ichanekileyo ayisiyonto imbi njengoko iphupha livela kwaye ibonisa kuphela ukuba umntu ophuphayo unoloyiko oluthile (phobia) kwaye kufuneka alawulwe ngokukhawuleza ukuze inganyuki kwaye izise umonakalo omkhulu. kwilixa elizayo.
Umzekelo oqhelekileyo weli phupha kuxa umntu sele eza kuthatha ikhefu aye kwindlu yaselwandle kunye nosuku olungaphambi kokuba aphuphe ukuba uleqwa ngamapolisa. Qaphela ukuba nangaliphi na ixesha eli phupha libhekisa elwandle, kodwa ezantsi libonisa kuphela ukoyika kolu phupha lokuqubha.
Ukuphupha umkhosi wamapolisa
Kwakuqhelekile ukuva amabinzana anje: “Ngaba ufuna ukhuseleko? Emva koko yiya kuhlala kufutshane nebutho lamapolisa. " Kwaye ukutolikwa kolo hlobo lwamaphupha kuneso similo, oko kukuthi, ukhuseleko noxolo.
Ke xa uphupha umkhosi wamapolisa, oko kubonisa kuphela imeko yokwazisa ukuba uziva ukhuselekile kwaye ubuncinci uxolile. Eli lixesha elifanelekileyo lokuba uthathe amanyathelo afanelekileyo kwaye abalulekileyo, kuba uya kuba neenyawo zakho emhlabeni ukukhetha eyona ndlela iphambili.
Ukuphupha ukuba ulipolisa
Eli phupha lineentetho ezimbini ezinokubakho, kwaye kuxhomekeke kumphuphi ukuba ave into ethethwa yintliziyo yakhe xa ekhangela olona toliko lubalaseleyo.
Ekuboniseni kokuqala nokubonakalayo komnqweno wethu wokuba lipolisa. Xa sinobizo lwale ndawo ithile, olu hlobo lwamaphupha luqheleke kakhulu!
Inketho yesibini kukuba ujongene nomcimbi obuthathaka (onokuthi ubandakanye nosapho) kwaye oko kubandakanya isimilo kunye nokuziphatha. Inokuba, umzekelo, ukukhulelwa kwangoko kwebhinqa eliselula kusapho, imiba enxulumene nokuqhomfa, ubusela obuncinci, njl. Ngamanye amagama, umbono apha kukuba ukuqonda kwakho okuphezulu kokuziphatha akunakuhlala nalo mbandela kwaye ujonge indawo, isisombululo.
Ukuphupha ngezenzo zamapolisa
Ukuba, umzekelo, uphuphe ngokudubula okubandakanya amapolisa kunye nabathengisi beziyobisi, nokuba ukufa Okanye akunjalo, sisilumkiso esivela kwi-subconscious yakho ukuba unomntu osenyongweni onomona kakhulu ngawe kwaye oku kuya kusiba krakra kwesi senzo, kokukhona le mvakalelo ilimazayo.
Ke ngoko, kulungile ukuba uqaphele ngakumbi ukuze ukwazi ukumchonga lo mntu emva koko umthintele ekubeni anxibelelane neenkcukacha eziphambili zobomi bakhe, ngakumbi iiprojekthi, ukuze angafumani mandla angalunganga kwaye aqale ukwenza iimpazamo. Rhoqo lo mntu usondele kakhulu kangangokuba kunzima ngenene, kodwa kubalulekile ukwazi ukuze ukwazi ukuzikhusela ngcono.
Njengoko sele ubonile, intsingiselo yokuphupha ngamapolisa iya kwahluka kakhulu, konke kuxhomekeke kwindlela evuke ngayo ephupheni. Nangona kunjalo, kufuneka usoloko ulumke ngaphambi kokwenza isigqibo.